prosperous private equity: Wathi yena wayeya nabangane bakhe, kodwa omunye abangane bakhe olubizwa ekhaya ukubuza ukuthi iyithole kanjani . Ingabe uthanda amanga ?
Wathi yena wayeya nabangane bakhe, kodwa omunye abangane bakhe olubizwa ekhaya ukubuza ukuthi iyithole kanjani . Ingabe uthanda amanga ?
Wathi yena wayeya nabangane bakhe, kodwa omunye abangane bakhe olubizwa ekhaya ukubuza ukuthi iyithole kanjani . Ingabe uthanda amanga ? Kanjani Wazi umlingani wakho amanga noma cha ?
Uma ezisola ngolimi lwabo lisho umyalezo ukudideka ke sekuyisikhathi ukufuna omunye zimpawu . Isibonakaliso osobala kakhulu ngolimi indikimba umlingani wakho .
Richard Newman , umcwaningi we komzimba ,
babelana amathiphu zendlela ukubona amanga .
Ngemuva kocwaningo in Neuro Programming yolimi ( NLP ) waqeqesha abantu kuka 6.500 ezivela emazweni 29 ukuthi ngempumelelo sebenzisa komzimba kanye nendlela ukufunda izimpawu ekuphileni kwansuku zonke .
" Indlela engcono ukuze wambule ngabe umuntu olele noma cha ukuba sinake noma iyiphi semfene and unfamiliarity , " kusho Newman .
" Ngaphezu amathuluzi ezingaba ukubona amanga , okumele zibhekwe yiyona ukufika izimpawu zokucindezeleka , sikhathazeke , futhi ecindezelekile . "
Usikisela kufanele usethe umsindo omuhle ngaphambi kokuqala uphenyo . " Qinisekisa it kuvumelana neqiniso , " kusho Newman . " Musa nje ukukhuluma eziya icala ngamandla , wena ufuna wenze abantu abazizwa buza kuqala . "
Newman ukholelwa kuyokusiza ukukhomba izinguquko eziphawulekayo ebukeka ngayo .
Uma wenze kubo ukhululekile futhi ethule ke zikhona izimpawu ukuthi kufanele afune :
Flashing . Eye Ukunyakaza kungasho eziningi zokuthi uthembeke ukwazi amanga . Umuntu ovamile ° ng kanye njalo ngemizuzwana 10 , ngakho uma yena ° ng Ngokuvamile , kuba khona amathuba okuba eziningi ukuthi wayecabanga ( kungenzeka elele ) ngokushesha .
I touch of the isandla ebusweni. Izinga eliphakeme kunyakata kwemtimba isandla emhlabeni ebusweni , ayanda izinga nokukhathazeka . " Thina eklanyelwe ngokwemvelo ukufakazela iqiniso , " kusho Newman . Ngakho , noma iyiphi indlela eyenza izandla zakhe ukuze amboze ebusweni , ibonisa umuntu uzama ukufihla amanga .
Kungazelelwe bethule noma esishubile . Okuphambene of ukuthatha amehlo akhe likhiphe , Blankly impendulo lubonisa nako ukungathembeki . Kwakuvamile abaqamba amanga abenza umzamo okhethekile hhayi eziningi ezinyakazayo amehlo abo ukuze alenze ubukeke esikholisayo .
Kungase nokusola uma othile wabheka Ngethuka kakhulu futhi bacabange ukuthi amanga , kodwa isimo sengqondo ovamile . Something engajwayelekile sasixoxa nomuntu ifana into ebaziwe .
Ungasondeli othile lapho bematasa , kulula kakhulu
ukuba yokufihla ukusabela nomzimba wabo cover kolimi lapho uku simatasa emsebenzini .
Lezi ziqondiso ngeke ibuyele kuwe ube umtshina amanga . Kodwa ngokufunda komzimba kothile , okungenani ungathola ukuqinisekiswa lapho uzizwa izinsolo.
Posted by Juragan Channel at 2:22 PM